Lenovo ThinkPad T490 Black (i5-8th Gen) (20N2003EVN)-3 ~ ICT.com.mm
HomeLenovo ThinkPad T490 Black (i5-8th Gen) (20N2003EVN)-3
Lenovo ThinkPad T490 Black (i5-8th Gen) (20N2003EVN)-3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ThinkPad T490 MTM: 20N2003EVN Code: NB0010208 Intel® Core™ i5-8265U Processor (6MB Cache , 1.60GHz up to 3.90 GHz) Memory: 8GB DDR4 2400 (Onboard) + 1 Slot Storage: 1TB... [Learn more]
Brand: LenovoSKU: 152929N/ASee more: Computer Systems, KMD, Laptops / Notebooks, Lenovo, Products, Recent UpdatesFilter by: KMD, Laptops (PC), USD
Intel® Core™ i5-8265U Processor (6MB Cache , 1.60GHz up to 3.90 GHz)
Memory: 8GB DDR4 2400 (Onboard) + 1 Slot
Storage: 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 (Only)
Display: 14.0″ FHD IPS AG
Battery: 3Cell 50WH
Bag: Targus 15.6″ Business Casual Slipcase
ဒေတာတွေအများကြီးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ Professional တွေအတွက် အထူးရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Lenovo ThinkPad T490 လုပ်ငန်းသုံး Laptop ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းခံ Laptop တစ်လုံးဖြစ်ပြီး မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိအောင်အထူးရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက် Laptop ရဲ့ CPU အဖြစ် i5-8 th Gen Processor ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းသုံး Software အမြင့်တွေအသုံးပြုရတဲ့အခါမှာ CPU တင်သာမကလုံလောက်တဲ့ RAM ရှိဖို့လည်း လိုအပ်တာကြောင့် RAM 8GB (DDR4, 2400MHz) ကိုတွဲဖက်တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ RAM 8GB နဲ့ မလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်း RAM Slot အလွတ်တစ်ခု ပါဝင်တာကြောင့် နောက်ထပ် RAM Upgrade ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့အတွက် SSD 1TB (M.2 2280 PCle NVMe) ကို ထည့်သွင်းပေးထားလို့ဒေတာအများကြီးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရသူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။ HDD ထက်အဆပေါင်းများစွာမြန်ဆန်တဲ့ SSD ကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒေတာအသွင်းအထုတ်၊ Windows နဲ့ Software အဖွင့်အပိတ်တွေက လုံးဝမြန်ဆန်မှာဖြစ်လို့ မြန်တာကိုမှ နှစ်သက်တဲ့ Professional တွေအကြိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွားလေရာကို အဆင်ပြေပြေ သယ်သွားနိုင်ဖို့အတွက် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 14”ကိုမှ ပါးလွှာတဲ့ ဘေးဘောင်ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်က Full HD Resolution ရရှိမှာဖြစ်ပြီး IPS နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ရုံသာမကကာလာအရောင်အသွေးကလည်း ပုံမှန် Full HD တွေထက် ပိုမိုစိုပြည်လှပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Anti-glare နည်းပညာပါဝင်တာကြောင့် ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အလင်းမပြန်ဘဲ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက် Integrated Intel UHD Graphics 620 ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီးပုံမှန်လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Password အကြာကြီးရိုက်နေစရာမလိုဘဲ လက်ဗွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ Login ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ Finger Print Reader လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ OS အတွက် Windows 10 Pro ကို ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့်ရုံးမှာရှိတဲ့ အခြားကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Remote Desktop လို အမိုက်စားလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဘတ္ထရီအတွက် 3Cell 50Whr ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကိုတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် ဘတ္ထရီပါဝါကောင်းမွန်တဲ့ Laptop တစ်လုံးဖြစ်ပြီး တစ်နာရီအတွင်း 80% အထိ အားပြန်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Lenovo မှ ကြော်ငြာထားပါတယ်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအတွက် မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းဒေတာတွေ မပေါက်ကြားဖို့က အရေးကြီးတာကြောင့် dTPM လို အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေး နည်းပညာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ စွမ်းရည်မြင့် Business အဆင့် Laptop တစ်လုံးကို မိမိနဲ့အတူ စမတ်ကျကျသယ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ Targus အမှတ်တံဆိပ် 15.6″ Business Casual Slipcase အိတ်ကို လက်ဆောင်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Choose dramatic Dolby Vision® high-dynamic-range (HDR) technology, available on the WQHD panel that boasts increased brightness, expanded contrast, amazingly accurate colours, and refined detail. Combine with discrete graphics and the T490 is perfect for working with multimedia. Or go with the FHD low-power option for enhanced battery life. No matter which display you choose, the T490 featuresanew bezel design withalarger display area.
The T490 delivers up to 16.1 hours of battery life*. And if you’re running low, Rapid Charge technology provides 80% capacity in just an hour. Soa60-minute lunch break oralayover can easily boost your battery up to more than 12 hours.